Netwọk mmekọrịta site na ọnụ ọgụgụ | Martech Zone
Netwọk mmekọrịta site na ọnụọgụ
Fraịdee, June 24, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Nyaahụ, anyị gosipụtara Infographic mara mma na Akụkọ banyere mmekọrịta mmekọrịta. Taa, anyị enwetala Infographic ọzọ mara mma - steeti dị ugbu a nke netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụ ihe omimi miri emi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na nha, igwe mmadụ, na uto - na-enye ụfọdụ nghọta ma anyị erutela ebe izu. Ihe omuma ihe omuma a bu ikike nke Na-eleghara Social Media anya.
Otu eserese nke nwere ike inye echiche na-ezighi ezi bụ Ingmụ, onye gbanwere usoro azụmaahịa ya site na n'efu na netwọkụ akwụ ụgwọ. O doro anya na ha ga-atụfu ọtụtụ mmadụ na njem ahụ - mana ha na-eto nke ọma na 2011 dị ka sọftụwia dịka ndị na-eweta netwọkụ mmekọrịta na-elekọta mmadụ.
O doro anya na infographic na-adọrọ mmasị, mana ọnụọgụ enweghị ebe ọ bụla! Ọ dị mma ịmara na Plaxo bụ ebe ebe omume igwe mmadụ kacha ochie dị, mana ọ ga-aba uru karịa ụfọdụ ọnụọgụ siri ike n'ebe ahụ.
Daalụ maka ịkekọrịta Doug
Ndewo Jeremy! Ihe data na nsonaazụ ya dị na mkpesa edepụtara na ala nke Infographic (M kwesịrị ikwu na nke ahụ na post! Ọ bụ na http://bit.ly/2011-social-analysis
Daalụ maka idebe m n'eziokwu!
Hooray maka LinkedIn!